Blogs – NRN Khabar
लण्डन । गोर्खाली समाज युकेको अध्यक्षमा अशोक ढकालले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । यही अप्रिल २३ तारिख शनिवारका दिन साउथ ह्यारो स्थित फुटबल क्लवमा हुने समाजको आठौँ अधिवेशनले निर्वाचित गर्ने नयाँ पदाधिकारी अन्तर्गत ढकालले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । हाल महासचिव पदमा काम गर्दै आईरहेका उ
काठमाडौं । युके युनिभर्सिटी फेयर २०२२ हुने भएको छ। एस.आइ.यूकेको आयोजनामा जुन ११ मा युके युनिभर्सिटी फेयर २०२२ हुने बताइएको छ। बेलायत पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् २०१८ देखि नेपालमा यो सेवा सुरु गरेको हो। एस.आइ.युकेले ७९ देशमा ४० ग्लोबल
६ वैशाख काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी गठबन्धन नगर्ने हो भने कांग्रेसको हालत पहिलेकै चुनावको जस्तो हुने बताएका छन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) ले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाले गठबन्धन नगरि चुनाव लडेमा पहिलेको जस्तै हालत बताएका हुन्।
काठमाण्डौ। बिदेशमा बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरु मध्य काग्रेसको शसक्त भातृ संगठनका रूपमा अगाडी बढेको एनपिसीसीको एक समुहले काठमाण्डौमा एउटा छलफलको आयोजना गरेको समाचार प्राप्त भयको छ। यो समाचार एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय महासचिवका उम्मेदवार विनय अधिकारीले दिनु भयको हो। प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका गृहमन्त
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा एनआरएनए अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्यलाई सभपातिका उम्मेदवार डा. शेखर कोइरालालाई जिताउन लागेको आरोप लागेको छ । आचार्यले डा. कोइरालालाई जिताउन नेपाली जनसम्पर्क समितिमार्फत आएका प्रतिनिधिलाई लविगं गरेको र भोट मागेको खुलासा भएको हो । कांग्रेस सभापतिमा निर
काठमाडौं - ग्लोवल गोरखा समाजका संरक्षक राम प्रताप थापा गैर आवासीय नेपाली संघको प्रमुख कार्यवाह निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त हुनु भएको छ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत लिलामणि पौडेलले कार्यव्यस्तताको कारण देखाउदै पदबाट राजीनामा दिएपछि थापालाई कार्यवाहको जिम्मेवारी दिइएको हो । निर्वाचन समितिको शुक्रबारको बैठ
जर्मनी । गैर आवासीय नेपाली संघका कोषाध्यक्षका उम्मेदवार राजन त्रिपाठीलाई नेपाली जनसम्पर्क समितिका संस्थापक, नेपाल जनसम्पर्क बिभागका सदस्य तथा एनआरएनए अभियन्ता समाजसेवी दिल गुरुङले समर्थन जनाउनु भएको छ । त्रिपाठीलाई नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ र सहयोग रहने बताउँदै अगाडि बढ्न र सबैलाई सहयोग गर्न
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघको आसन्न निर्वाचनमा कुल आचार्यले प्यानलले कोषाध्यक्षको टुंगो लगाएको छ । आचार्य प्यानलले अमेरिका निवासी राजन त्रिपाठीको टुंगो लगाएको हो । त्रिपाठी पूर्व नेविसंघका नेता समेत हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार आचार्यलको टिममा लोक दाहालको चर्चा भए पनि
बेल्जियम । गैर आवासीय नेपाली संघको आसन्न निर्वाचनमा कोषाध्यक्षका उम्मेदवार राजन त्रिपाठीलाई बेल्जियममा भब्य स्वागत गरिएको छ । एनआरएनए अमेरिकाज् क्षेत्रीय संयोजक समेत रहनु भएको त्रिपाठीलाई बेल्जियममा भब्य स्वागत गरिएको हो । एनआरएनए निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा चुनावी प्रचार अभियानको क्रममा यूरोप भ्